Eto Madagasikara: andrasana ny fanalefahana ny fiovan’ny toetr’andro | NewsMada
Eto Madagasikara: andrasana ny fanalefahana ny fiovan’ny toetr’andro
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Tahiry ho an’ny tontolo iainana maneran-tany (CFEM)*, tamin’ny taon-dasa iny, ny fananganana tetikasa sy hisian’ny mangarahara momba ny Fihaonambe tany Paris (COP 21). Miara-miasa amin’io tetikasa io ny Birao nasionaly mandrindra ny fiovan’ny toetr’andro (BNCCC)* ao amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, haivoary, ala sy ny Conservation International (CI).
Fiaraha-miasa ho fampiharana sy fanamafisana ny eto an-toerana ny fepetra momba ny Fihaonambe tany Paris (COP 21) natao ny taona 2015. Andrasana amin’i Madagasikara ny fanalefahana ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro, manimba ny seha-pihariana maro, indrindra ny fambolena. Efa nanaovana atrikasa ihany ny fiatrehana izany eto an-tanindrazana.
Nampahalalana ireo nandray anjara tamin’ny atrikasa ny tanjona sy ny vokatra andrasana ; ny fifampizarana ny vaovao ao anatin’ny mangarahara sy izay tetikasa atao mifanaraka amin’ny COP 21 ; ary ny andraikitry ny tsirairay. Vao mainka anefa miharatsy ny toetr’andro, raha ny fahitana ny haintany any Alaotra sy any amin’ny faritra sasany hafa. Tsy vitan’ny resaka ambony latabatra fotsiny ny tokony hatao fa mitaky asa maro, toy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fambolen-kazo, indrindra ny fanaraha-maso izany.
Fifanarahana eo anivon’ny Firenena mikambana ny fiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro, nomena anarana Conférence des parties (Cop), ka fihaonambe faha-21 natao tany Paris, nandraisan’ny firenena anjara miisa 195 sy avy ao amin’ny Vondrona eoropeanina. Niara-nitady vahaolana iraisana maneran-tany ireo firenena ireo noho ny fiakaran’ny hafanana 2°C. Iainana eto Madagasikara izany, ankehitriny.